Ny tranombakoka eoropeanina ilaina rehefa mandeha | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | kolontsaina, General
Ny iray amin'ireo fitsidihana lehibe indrindra rehefa mivezivezy izahay dia mazàna ireo tranombakoka any amin'ireo tanàna alehantsika. Io no ampahany ara-kolontsaina indrindra amin'ny rehetra, ary amin'izy ireo isika dia afaka mankafy ny kanto, fampiratiana ary ny tantaran'io na sivilizasiôna hafa. Androany dia misy tranombakoka isan-karazany, fa anio hiresaka momba ny Tranombakoka eoropeanina tena ilaina rehefa mandeha.
Raha ianao dia iray amin'ireo izay mitady lalana ara-kolontsaina foana, izay tia zavakanto ary tia mandeha eo amin'ireo asa-tanana, ireo no toerana tokony hitsidihanao. Ny sasany amin'izy ireo dia manana fidirana maimaim-poana, ny hafa kosa maimaim-poana amin'ny andro vitsivitsy. Miresaka momba ny tranombakoka eropeana manan-danja indrindra, ireo izay ahitana ireo sanganasa kanto sy lehibe indrindra.
2 Tranombakok'i Reina Sofía
3 Museum an'i Louvre
4 Museum an'i Van Gogh
5 Tranombakoka Vatican
6 Tranombakoka britanika
Ny tranombakoka Prado, ny zava-dehibe indrindra tany Espana, dia nisokatra tamin'ny 1819. Misy fanangonana tsara ireo artista tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. El Greco, Goya, Velázquez, Bosco, Titian na Rubens. Ao amin'ireo galeriany dia misy sanganasa mahasarika mpizahatany eran'izao tontolo izao. 'The Garden of Delights' nataon'i Bosco, 'The Three Graces' nataon'i Rubens, 'Las Meninas' nataon'i Velázquez na 'The Executions' nataon'i Goya ankoatry ny maro hafa.
Ny fitsidihana ny Prado Museum dia atao aorian'ny fandoavana ny saram-pidirana. Misy isa maromaro, ahena ho an'ny olona mihoatra ny 65, fianakaviana lehibe na tanora. Azo atao ihany koa ny mitsitsy raha maka bonus amin'ny tapakila roa isan-taona ohatra. Alohan'ny hitsidihantsika ny tranombakoka dia afaka miditra ao amin'ny tranonkalany isika ary miandrasa fampirantiana mpandeha lavitra hitantsika. Voalamina ihany koa ny fitsangatsanganana sy ny fampianarana.
Tranombakok'i Reina Sofía
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny zavakanto ankehitriny any Espana isika dia tsy maintsy mankany amin'ny Reina Sofía. Ny zavatra tsara momba ny maha any Madrid dia ny ahafahantsika mitsidika ireo tranombakoka telo lehibe miaraka amin'ny tapakila iray. Ny Prado, ny Reina Sofía ary ny Thyssen-bornemisza, mba ho mora vidy kokoa. Ny Reina Sofía dia miorina ao amin'ny Hopitaly Madrid taloha, trano neoclassical miorina ao amin'ny faritr'i Atocha. Ao amin'ity tranombakoka ity, ny sanganasan'ny mpanakanto toa Pablo Picasso, Joan Miró na Salvador Dalí. Ny sanganasa mavitrika amin'ny hetsika maoderina dia aseho ihany koa, toy ny surrealism, cubism na expressionism, miaraka amin'ireo mpanoratra toa an'i Francis Bacon na Juan Gris.
Nandao an'i Espana izahay hankany Frantsa, tao amin'ny tranombakoka iray be mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao. Izahay dia manondro ny Louvre, izay hita ihany koa ao amin'ny lapan'ny Louvre, izay trano mimanda taloha. Nosokafana ny tranombakoka tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX ary isan-taona dia mandray mpitsidika bebe kokoa izy. Tamin'ny taona valopolo taona dia noforonina ilay piramida fitaratra malaza, izay ankehitriny no misolo tena ny tranombakoka amin'ny sary maro. Ao amin'ny tranombakoka dia mahita asa manan-danja toy ny 'Gioconda' an'ny Leonardo da Vinci, 'Liberty Leading the People' avy amin'i Delacroix na sary sokitra toa ny 'The Venus de Milo' avy any Gresy fahiny na ilay 'Seite Scribe' an'i Egypte taloha. Tranombakoka lehibe dia lehibe izy io, misy efitra maro ary matetika misy olona maro. Ireo tia zavakanto dia afaka mandany ora maro hitetezana azy io, ho an'ny ambiny dia mahaliana ny mahita ireo sanganasa lehibe. Mila mandoa fidirana ianao na dia miditra maimaim-poana aza ny zaza tsy ampy taona.
Museum an'i Van Gogh
Ny Museum Van Gogh dia ao Amsterdam, ary be mpitsidika indrindra ao an-tanàna. Raha mpankafy ilay mpanakanto nanapaka ny sofiny tao anaty krizy ianao, dia azo antoka fa tsy maintsy hijanona amin'ity tranombakoka ity ianao. mampiseho ny sary hosodoko, ny sary ary ny taratasiny. Ny sary hoso-doko dia milahatra araka ny fotoana nifanarahana mba hahafahantsika mankasitraka kokoa ny fivoaran'ny mpanakanto. Ao amin'ny rihana faharoa dia misy ny fanadihadiana momba ny sary hosodoko nataon'ny artista ary amin'ny fahatelo dia misy sanganasa tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Azonao atao ny mividy tapakila mahazatra na iray ho an'ny fitsangatsanganana voatondro izay misy fidirana laharam-pahamehana sy tsipika-tsipika.
Ny tranombakoka Vatikana no toerana misy lanja kanto an'izany an'ny fiangonana ary any Vatican City izy ireo. Misy tranombakoka marobe, toy ny Museum Gregorian'i Egypte, ny Museum Pio Clementino, ny Chapelle Nicolina, ny Museum Chiaramonti, ny Pavilion of the Coaches na ny Sistine Chapel, ankoatry ny hafa. Ao amin'ny galeriany dia afaka mahita sanganasa toa ny 'The Descent from the Cross' nataon'i Caravaggio na 'San Jerónimo' nataon'i Leonardo da Vinci. Ny asan'ny Sistine Chapel dia iray amin'ireo toerana notsidihina indrindra ary tsy isalasalana fa io no tsy tokony ho hadinoina amin'ireo Museume Vatikanina rehetra ireo.
Maimaimpoana ny British Museum, tsy maintsy mandoa fampiratiana fotsiny. Izy io dia iray amin'ireo lehibe indrindra eto an-tany ary iray amin'ireo tranainy indrindra koa. Betsaka ny zavatra azo jerena ao amin'ity tranombakoka ity, miaraka amin'ireo sanganasa avy any Egypte, Roma, Gresy taloha ary ireo sivilizasiôna hafa. Ilay Vato Rosetta Izy io dia iray amin'ireo manintona azy lehibe, ary avy aminy no namaritana ny hieroglyph egyptiana. Saingy misy zavatra betsaka kokoa, miaraka amin'ny efitrano maro natokana ho an'ny lohahevitra isan-karazany, miaraka amin'ny faritra misy fivarotana, boky ary fisakafoanana. Toerana handaniana ny tolakandro manontolo eo anelanelan'ny asa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny tranombakoka eoropeanina ilaina rehefa mandeha
Izay rehetra tokony ho fantatrao handehanana any Tibet